Ra’iisul Wasaraaha Soomaaliya oo khudbad ka jeediyay Gobolka Virgina ee Mareykanka | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Ra’iisul Wasaraaha Soomaaliya oo khudbad ka jeediyay Gobolka Virgina ee Mareykanka
Ra’iisul Wasaraaha Soomaaliya oo khudbad ka jeediyay Gobolka Virgina ee Mareykanka
Virginia(SONNA) Mudane Xasan Cali Khayre Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya oo ku sugan Dalka Mareykanka ayaa xalay gobolka Virginia kula kulmay qaar ka mid ah Jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool Mareykanka si uu warbixin uga siiyo xaaladda Dalka.
Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Khayre ayaa Khudbad uu ka jeediyay magaalada Alexandria ee gobolka Virginia wuxuu kaga hadlay xaaladda guud ee dalka, iyo yoolka ay hiigsanayso Dowladda Soomaaliya.
Khudbadda oo ahayd mid dheer ayaa wuxuu kaga hadlay arrimaha Siyaasadda,Dhaqaalaha,Ammaanka iyo dib u dhiska Dalka Soomaaliya,wuxuuna sheegay in Dowladdu ay ku guuleysatay wax ka qabashada arrimaha Amniga,bixinta mushaaraadka ciidamada iyo shaqalaaha,oo uu Raiisul Wasaaruhu sheegay in ahmiyad weyn ay siisay Dowladda.
“Waxaan idin balanqaadaynaa in aan soo celino sharaftii iyo karaamadii uu lahaa dalka, Waa la dhaafay waqtigii dhexdhexaadnimada,waa la dhaafay , waqtigii xumaanta qofka in uu sheego oo laga aamusi jiray,waxaan rabaa in qofkasta uu ka qeybqaato hormarka dalka,aan ku wada shaqeyno astaantii ahayd hadii aadan wax u tarikarin dalkaada,wax dhibato ah ha ugeysanin,Soomaaliya waa dal Sharaf leh,waxaa ii muuqanaysaa Soomaaliya oo barwaaqo ah”, ayuu yiri Ra’iisul Wasaare Khayre.
Wuxuu intaasi ku daray in Dowladdu ay ku guuleysatay in ay bixiso qeyb kamid ah deymihii dalka lagu lahaa isagoo xusay in ay bixiyeen lacag dhan 5.1 Billyan oo Dollar oo lagu lahaa Soomaaliya.
Raiisul Wasaare Khayre ayaa sheegay in qurba joogta Soomaaliyeed dhamaantood looga baahanyahay in ay kaalintooda ka qaataan hormarka dalkooda hooyo,isagoo ugu baaqay in khibradooda iyo aqoontooda ay isugu geeyaan maadaama ay door ku leeyihiin horumarinta dalkooda hooyo.
Hadalka ra’iisul Wasaaraha ayaa yimid markii uu soo dhamaaday shirkii Golaha Guud ee QM oo uu uga qeyb galay magaalada New York halkaasi oo uu ka jeediyay khudbad dheer oo uu kaga hadlay arrimaha Soomaaliya.
Previous articleCiidamada Amaanka puntland oo Hawlgalo ka sameeyey Magaalada Boosaaso
Next articleXiriirka kubada Miiska oo tababar heer caalami ah u furay garsoorayaasha kubadda Miiska ah